ငွေလမင်း: ကြုံရ ဆုံရ ပတ်စ်စပို့ သက်တမ်းတိုးတဲ့ ခဏ
Posted by ငွေလမင်း at 2:31 AM
အခု တလော ပြေးပြေးလွှားလွှား ဖတ်လိုက်ရတာတွေ အားလုံးက မတိုင်ပါနဲ့ ၊ မပြောပါနဲ့ ၊ မရေးပါနဲ့ ဆိုတာတွေချည်းပါလား။ အမှန်တရားကလည်း ကြာတော့ “ အမှားတစ်ရံ ” ကို ဖြစ်လာပါရောလား။ အင်း . . . .
ဒါနဲ့ ကြုံတုန်းလေး အကြံပေးချင်တယ်။ ပြောလို့လည်း တကယ်ဆို မကောင်းပါဘူး။ ပါဆယ်နယ်ကိုး။ ဒါပေမဲ့ ကို AATO ကိုတောင်မှ သွားပြီး မေးမိသေးတယ်။ အခု ပြောနေတာ ယောက်ျားလား ၊ မိန်းမလားလို့ . . . ဟီး။ သူ ကြောင်သွားပုံရတယ်။ ကိုယ့်မှာလည်း ဒီလို ခဏခဏ ဖြစ်ဖူးတယ်လေ။ အကောင့် တစ်ခုကို နှစ်ယောက်သုံးရင် ဒီလို ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ အခုလည်း ဖတ်နေတာ ကျွန်တော် ဆိုတော့ မစ္စတာငွေ မှတ်နေတာ ၊ အောက်ရောက်တော့မှ မစ္စ ဖြစ်နေပြန်ရော. . . . .
အင်း . . . . ကျန်းမာလျက်ပါပဲဗျာ။
သက်တမ်းတိုးတဲ့ ကိစ္စ၊ ထောက်ခံစာယူရတဲ့ ကိစ္စ၊ အခွန်သွားဆောင်ရတဲ့ ကိစ္စ ဒါတွေကို အန်တီ့ညီမတွေနဲ့ သားတွေဆီက မကြာခဏကြားကြားနေရတယ်။ အခုလို ဖတ်ခွင့်ရတာကျေးဇူးပါ ငွေလမင်းရေ။
ကျွန်တော် ကတော့ အကိုငွေ မှန်တယ်လို့ 
ထင်တယ် ။ ဒီကောင်တွေက ငြိမ်ခံနေလေ
မျက်စိလည်သွားတယ်... ကိုငွေက မဒမ့်နေရာမှာ ၀င်ရေးပေးတာမဟုတ်လား။
ဆိုးလိုက်တဲ့ သံရုံးတွေ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ။
ဟိုတစ်လောက အီးပါတ်စပို့ ပြောင်းတာ လူမသွားနိုင်လို့ပွဲစားနဲ့လွှတ်လိုက်တာ။ နာမည် မှာ Ma တစ်လုံး ပြုတ်ကျကျန်ခဲ့လို့ လေ..။ ရှင်းတာ မဆုံးနိုင်ဘူးပဲ။
အေးဗျာ....ပန်နစူလာက ဝန်ဆောင်မှုလုပ်နေတဲ့ တချို့
မှန်မှန်မြန်မြန်နဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်ရင် ဝန်ဆောင်မှု
တွေ ရှိနေစရာမလိုတော့ဘူး....၊ခုတော့ မလိုအပ်ပဲ ငွေကုန်၊
ကျနော် တို့ ပတ်စပို့ တွေက အလွန်ဆုံး ၃ နှစ်ပဲ သက်တမ်း ပေးတာကိုး။ တချို့ နိုင်ငံတွေဆို သူတို့ နိုင်ငံသားတွေ ပတ်စပို့ ကို ၅ နှစ် ၁၀ နှစ် သက်တမ်းပေးထား တော့ အလုပ်မရှုပ်ပေဘူးပေါ့။ ကျနော် လဲ ဘာလီမှာ မွေးတဲ့ သမီးလေး ပတ်စပို့ လုပ်ဖို့ ပြင်နေတာ ကလေးတောင် ၅ လပြည့်တော့ မယ် အခု အထိ မလုပ်ရသေးဘူး။ စာရွက်စာတမ်း အကုန် ပို့ထားပေမယ့် သံရုံးရှိတဲ့ ဂျာကာတာကို လူကိုယ်တိုင်လာ မှ စ လုပ်ပေးမယ် ဆိုတော့ ခက်တာပေါ့။ မြန်မာ သံရုံးတွေ အဓ်ိက အလုပ်က အခွန်ကောက်တာပါပဲ။ (စင်္ကာပူ မှာက တက်ကစီ လေးစီးသွားရုံလေးပါဗျာ။ ကျနော် ဆို လေယာဉ်နဲ့ တောင် ၂ နာရီ နဲ့ မိနစ် ၃၀ ကြာတယ်ခင်ဗျ။ ဈေးက လဲ ကေအယ်နဲ့ ဘာလီ ဈေးနဲ့ အတူတူလောက်ပဲ)
ကိုဇော်ကျနော့် ကိုမေးဘူးတယ်။ ကျနော်လဲ ဘယ်လို ပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ် :p
ဟဟ ကျုပ်တို့က ဘယ်တော့မှ ပွဲစားမအပ်ဘူး ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်တယ် ပတ်စပို့ကို ပွဲစားအပ်ရင် တစ်သိန်းခွဲ ပညာရေးကင်းရှင်းပါရင် နှစ်သိန်း.. ကိုယ်တိုင်လုပ်တာ ပညာရေးကင်းရှင်းရော လေးသောင်းခွဲပဲကုန်တယ် ပထမတစ်ရက် ဓာတ်ပုံရိုက် ဖောင်ဝယ် ဘဏ်ငွေသွင်း နာရီဝက် နှစ်သောင်းခွဲ
ပညာရေးကင်းရှင်း သောင်းနှစ်ထောင်. နောက်နေ့ဓာတ်ပုံရွေး ဖောင်စီ လက်ဗွေနှိပ် လက်မှတ်ထိုး ပြီးရင် စလစ်ထွက်လာ ငါးထောင်လောက်ပဲကုန်.. ဟိဟိ ပြီးရော ဘာမှလည်း ခက်တာမဟုတ်ဘူး.. အပျင်းကြီးပြီးပွဲစားအပ်ကြတာ.. ဟိဟိ ကိုကိုငွေနဲ့ မဒမ်ငွေနဲ့ကတော့ ငွေရေးကြေးရေးမစဉ်းစားအား.. အလုပ်တွေများလို့သာ ပွဲစားအပ်တာဖြစ်မယ်.. ကျုပ်ကတော့ အားနေတဲ့သူဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်လိုက်တယ်.. ဟိဟိ
အင်း ကဖိုးငွေနဲ့ မခင်ငွေတို့ ဘလော့ကိုရောက်ရင် ဘယ်သူရေးသလဲဆိုတာကို အသာမေ့ပြီး ဘာတွေရေးသလဲဆိုတာပဲ ဦးစားပေးပြီး ဖတ်လိုက်တော့တယ်...သက်တမ်းတိုးတယ် ဘာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေတော့ အခုထိ ကင်းနေတုန်းပဲ...တစ်သက်တာ ဗီဇာနဲ့ ပတ်စ်ပို့ရထားတယ်လေ...ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ ရွှေပြည်ကြီးမှာပေါ့...
အင်း ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင် ပိုက်ဆံပေးတဲ့ အချိန် ပိုက်ဆံရေနေလို့အအော်ခံရသေးတယ်။ နောက်ကလူတွေ စောင့်နေတယ်တဲ့။ ကိုလဲ တနေကုန်စောင့်ခဲ့ရတာပဲ။ ပိုက်ဆံလဲပေးရသေး မျက်နှာကလည်း ရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့ ။ ကိုယ့် ချွေးနည်းစာ တော့ အလကားလိုခြင်ပြီးတော့။
MOM changed the pass rules. We don't need to wait the passport life.
မြန်မာသံရုံးထဲမှာ ကပ်ထားတဲ့ A4 ဆိုဒ် နံရံကပ်စာလေးက ပွဲစားများကြောင့် ပြသာနာဖြစ်ရင် တာဝန်မယူတဲ့
သံရုံးကိုယ်တိုင်ကတော့ ပွဲစားတွေကို လက်ခံနေပြီးတော့ ပွဲစားတွေများ အများကြီးဘဲ
တနေ့တည်း လုပ်ရင် ပြီးတဲ့ကိစ်စကို
ဖောင်လာယူပြီး အခွန်ဆောင်ဖို့ ရက်ချိန်းယူတာတရက်
အခွန်လာဆောင်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက် လက်ဗွေနှိပ်တာကတရကက်
ကိုယ်တိုင်လာလုပ်မယ်ဆိုရင် ၃ ရက်အချိန်ကုန်မှာပါ